ခိုးရန်းခဲအိ ၏ ရှုခင်းနေရာ ZEKKEI Japan
မိုမိဂျိ နာမည်ကြီးနေရာအဖြစ် နာမည်ကြီးပြီး နိုဝင်ဘာလက တစ်လလုံး မီးထွန်းထားပါတယ်။ တိုမိုအဲမြစ်တလျှောက်ရှိ လျှောက်လမ်းမှ ခိုးဆဲခိဘုရားကျောင်းထိ အပင်ပေါင်း ၄၀၀၀ ခန့် ရှိတဲ့ မေပယ်ပင်တွေက အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဝါရောင်တွေ ဆင့်ပုံပြီး ကြည်လင်တဲ့မြစ်ရေမှာ ထင်ဟပ်နေတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်က တကယ့်ကို အံ့မခန်းရှုခင်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုမိဂျိရာသီချိန်မဟုတ်ပေမယ့် မတ်လကုန်မှ ဧပြီလအစထိ ခါတခုရိပန်းတွေ လှလှပပပွင့်နေပါတယ်။နွေရာသီက မြစ်ရေကစားခြင်း ၊ ဆောင်းရာသီက ပြင်းပြင်းထန်ထန်နှင်းကျတဲ့ရှုခင်းကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
Meitetsunagoya လိုင်း ( higashiokazakiဘူတာ ) မှ ဘတ်စ်ကား ၁ နာရီ ၁၀ မိနစ်ခန့် ကြာချိန်
Meitetsu လိုင်း ( jōsuiဘူတာ )မှ ဘတ်စ်ကား ၁နာရီကြာချိန်
※Meitetsunagoya လိုင်း ( higashiokazakiဘူတာ ) မှ ဘတ်စ်ကားက
မိုမိဂျိရာသီချိန်ရဲ့စနေ . တနင်္ဂနွေ . နေ့ ထူးနေ့ မြတ်တွေမှာ ၂ နာရီ အထက် ကြာပါတယ်။
စာနဂဲဂူရင်းရိုးဒို ( Rikiishi IC ) မှ ၁၅ မိနစ် ၊ Tōkaikanjōdō `toyotakanpachi IC ) မှ ၂၀ မိနစ်ခန့် 